Tantara : FONJAN'OLO-MARINA - hjravs - Tononkalo Malagasy - Serasera.org
Tantara : FONJAN'OLO-MARINA - hjravs
FONJAN'OLO-MARINA (Fizarana faha-roa)
"Mba ho firenana vanona ny Tanindrazako"
(Tantara noforonina izy ity ka ialana tsiny ny mety ho fitoviana amin'ny trangan-javatra tena misy)
...Rehefa avy niontsana tamin'ny rano natolotr'i Zankely i Masindah dia nanatona anay.
- Tonga soa aty amin'ny afobe ny olomasina, hoy aho nananihany azy sady nanolo-tanana.
- Faly tafahaona letsy ry Dida, hoy izy namihina ahy. Na dia tsy nifanerasera firy aza izahay roalahy tany an-tanàna, rehefa tafahaona amin'ny toerana toy izao dia manjary mifankahazo am-po ho azy.
- Ireto no akamatsika ato hoy aho, i Bebena, Raôly, i Ralila na Jokera, ary i Zankely, 'lay nanome rano an'ialahy teo.
Ento ny tantaran'ialahy hoy izy efa-dahy saika niara-niteny, fa efa liana daholo handre ny tantaran'i Masindah.
- Tsy tantara mahafinaritra aloha mazava ho azy, hoy i Masindah, nanomboka ny tantarany:
"Tanàna mahatamana ny tanànanay mbamin-dr'i Dida. Soamahatony no anarany. Ahitana sekoly, hôpitaly, tsena, fiangonana sy izay rehetra maha-tanàna ny tanàna. Efa niorina taona maro daholo ireny.
Volana maromaro lasa 'zay dia nisy olona "ambony" niaraka tamin'ny ben'ny tanàna sy sinoa vitsivitsy ary mpandrefy tany, tonga namariparitra ny tanàna.
Nambaran'izy ireo fa nisy ny fifanarahana nataon'ireo sinoa tamin'ny fanjakana ny amin'ny fitrandrahana eo amin'ny tanàna satria voalaza fa faritra be volamena io faritra io.
Anisan'ny nitarika ny fanoherana momba ity fitrandrahana ity ny tenako. Satria na misy aza vola ampidirin'ireo sinoa (raha hisy) ao amin'ny kitapombolam-panjakana, dia tsy hahasoa ny firenena sy ny fiainam-bahoaka mihitsy izany fitrandrahana izany, fa ankoatra ny fandravana foto-drafitr'asa toy ny fiangonana, kianja, sekoly, tafiditra ao koa ireo faritra stratejika, renirano, vondron'ala sy ny sisa... dia tsy misy afa-tsy tany mena sisa no holovain'ny taranaka, avelan'ny fitrongisana aorian'ny fitrandrahana.
Fantatr'ialahy tsara ry Dida, hoy Masindah nanapaka ny tantarany sady nibanjina ahy, fa mpitarika tanora eo anivon'ny fiangonana aho. Teny tokana monja no nataoko dia indreny nifanentana ny tanoran'ny tanànako. hipoka vetivety ny kianja. Mangetaheta olo-marina hitarika azy ny tanindrazako.
Olona ambony maro no nifandimby nanatona ahy taorian'izay, nandrabiraby volabe tsy toko tsy forohana, mba hamonoako ny afom-pitiavan-tanindrazana ao am-pon'ireo tanora izay efa nanomboka hiredaka. Saingy nolavin'ny feon'ny fieritreretako ny hanao sorona ny ho avin'ny taranaka. "Ny olom-banona dia mila manoratra tantara madio, tsy misy famadihana, ho an'ny fireneny."
Rehefa tsy nahita rirany taty amiko izy ireo, dia ny vadiko no notambazany vola be, fiara, trano... mba handresy lahatra ahy. Indrisy, hoy i Masindahy sady nanganohano ny masony, taranak'i Eva marina ny vehivavy ka tsy mahatanty ny filonjehitry ny paoman'ny menarana. Rehefa tsy nahaodina ny lohako ilay andefomandriko dia nanaiky hijoro ho vavolombelona tsy marina tamin'ny fiampangana ahy ho nanodikodina ny zandriny vavy vao telo ambin'ny folo taona. Resy aho. Voageja indray ny marina.
Tany ngazana sisa hovantaniko any an-tanàna rehefa tafavoaka eto aho afaka dimy ambin'ny folo taona, hoy Masindahy tsy nahatana intsony ny ranomasony.
Nanopy ny masoko teny amin'izy efa-dahy aho, niondrika i Beben, nihaotraotra loha i Raôly, nihidy vazana kosa i Ralila, ary nivonkona ny totohondrin'i Zankely. Fa tao anatiko tao, nisy hery te-hitroatra mafy. Hery tsy hanaiky hogiazana miaraka amin'ny marina ato anatin'ny fefin'ity fonja ity intsony. Mihosona ao anaty maloto tanteraka manko ny Tanindrazako./...
( tsy hoela ny fizarana faha-telo amin'ny Fonjan'olomarina : "Tapaho ny lohany")
Sokajy : Ady, Fiaraha-monina, Hambom-po, Namana, Tanindrazana
AsLamy (20/09/2016 19:41:58)
wahouu" tiako be f aza ela fotsiny a
andry 1000 (22/09/2016 04:29:54)
Milay grand a! efa hitako ao aminy GROUPE SOMBIN-TANTARA SY TONONKALO NY TOHINY E!
Masoandro Mainty (16/02/2017 13:15:33)
Mba tiako ho hita hatramin'ny voalohany ity tantara ity!"Arahinkaja Elie Ralijaona" no anarako ao anaty facebook.Mba azonao "identifie"-na ao amin'io tantara io ve ny anarako ry Andry,azafady?
Daty : 16/09/2016
Mpamangy : 2529
AMIN'ILAY MISY, Sa AMIN'ILAY TSISY...